न्यूज सञ्जाल: » महिला लिगमा एपीएफकी सावित्राले दुई खेल गुमाउने !
महिला लिगमा एपीएफकी सावित्राले दुई खेल गुमाउने !
न्यूज सञ्जाल ४ फाल्गुन २०७७, मंगलवार ०९:०७
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय महिला लिगमा आज रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका र उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका बीच खेल हुँदै छ । खेल दिउँसो २ बजे एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा हुने छ ।
राष्ट्रिय महिला लिगमा विभागीय टोली एपीएफ क्लब उपाधि हात पार्नबाट मात्रै एक अङ्क टाढा रहेको छ । एपीएफलाई पछ्याइरहेको आर्मीले अर्को खेल जितेमा एपीएफले अन्तिम दुई खेलमा एकमा जित निकालेमा च्याम्पियन बन्नेछ । यदि आर्मीले अर्को खेल बराबरी खेलेमा एपीएफ अहिलेको अवस्थामा नै च्याम्पियन बन्नेछ ।
यसैबीच विभागीय क्लब एपीएफकी स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारीले राष्ट्रिय महिला लिग अन्तर्गतको बाँकी खेल गुमाउने सम्भावना रहेको छ । लिग अन्तर्गत हिजो नेपाल पुलिस क्लबविरुद्धको खेलमा चोट लागेकाले खेल गुमाउने सम्भावना रहेको र एमआरआई गरेर हेरेपछि थाहा हुने बताएकी छन् ।